Nyanzvi mukuratidzira & kukanganisa kwemuitiko kwe + 10 makore
Shell Scheme Inotanga
Sachigaro & Stool
Mutengesi Kugutsikana, Individual Diginity, Shareholder Value
3 zvinobatsira zvekunyoresa zvinoratidzwa
Nguva: 2018-Sep-03 Hits:
Inoteverwa nekugadzirwa kwemazuva ano kudhindwa kwekombiyuta dye sublimation kudhinda, chigadziko chiratidziro chinopa mukurumbira mukuru.
Digital dhayi sublimation pakudhinda michina rinobatanidza pamwe zvakanakira musono mapuranga uye portability yacho chemwenje, saizvozvo kunoita jira vanoratidza kumira kuva nani zvikuru pamusoro chinyakare anoratidza,
Kune mhando mitatu yembatya yakamira, iyo yekutanga ndiyo yakasarudzwa zvikuru, iyo yakatambanudzirwa pamusoro pesimbi yemafuta tubular.
Yechipiri ndiyo Pop up zviratidzo, Izvo ane furemu vasiyana jira. The Graphics vari akaramba akaisa uye anogona kuwedzerwa kana kudhonzwa shure nokuda Kuchinja mapuranga uye jira. Kana vakaratidza kuzarurwa, kuti kwakajeka achava rusvingo musono.
Pakupedzisira ndiyo Kupikisa chiedza bhokisi chikafu chinoratidza. Kuratidza Izvi zvinogona ruchatambanudzirwa pamusoro resimbi pepuranga uye anogona kuva nyore backlit kana divi aibvira kushandisa zvakatungamirira chiedza mukati kumira. The Makakatanwa jira iri vasonanidza pamwe silicone micheto nomumwe divi, uye mapuranga ari grooves kuti dzinoisa yacho silicone reuna kwakajeka. mucheka zviri nyore kuti kusingachakosheswi grooves. nzira iyi vatengi aigona shandisazve mapuranga, uye chete kushandura Graphics nyore.
Fabric kuratidzwa kushandisa dhayi sublimation yokudhinda ane yepamusoro chisarudzo, wakajeka rokudhinda. Nokuti ingi iri Ipwa chinokosha pane pamusoro payo, hazvizovi nyore kupera. Dye sublimation okudhindira isu namakemikari waakaita kuti zvinhu izvo hwakasimba kupfuura zvemaziso waakaita akadai UV kudhinda uye Inkjet.
The aruminiyamu furemu saizi iri kuchinja, izvo zvinogona kuitwa mune chero saizi. Kwakajairika PVC Panel anoda nhengo zhinji kuvaka Panel hombe, izvo nyore kuwana vazvo pakati aenzana. Nokuti rejira vanoratidza, zviri nyore kuti awane musono pemvura. The silicone micheto micheka vari akaiswa munzvimbo grooved, saka chinokosha tatamuka kuva zvakasimba.
Mucheka Matafura vari inotakurika chaizvo nokuti mapuranga aigona dzichakoromorwa zvidimbu zviduku, ipapo kwakabatana nokuda connectors uye kwakajeka raigona akapeta. The yose Kuratidzwa inogona kuchengetwa duku pasuru. Izvi zvinoita lightweight zvikuru uye nyore kutakura. You regai kunetseka pamusoro mucheka Graphics uchava crease, nekuti kana vari kureva pamatanda, elasticity yavo kunosvika kwavari unochengeta Graphics zvakasimba.
Summary Fabric ratidza kuti yepamusoro kudhinda uye musono chitarisiko kuti jira vanoratidza kwete chete nyore akamisa kuratidzira uye zviitiko, asi kunoitawo kuti kuratidzwa akakurumbira pakati vatengi. Ndicho nyore kuti vakaungana kana zvifambiswe pane chinyakare dzekuturika mikoko.
Zvekare: Mazano mashomanana aunofanira kuziva pamusoro pemutende wechiitiko
Zvadaro: Zvishomanana mazano pamusoro pekuratidzwa kukuru kwechikwata
Shanghai Chleh Ratidza Industry Ltd rakaumbwa muna 2008, pashure pfumbamwe makore rakadzikama kukura, tave aitungamirira akaigadzira pakuratidza uye chiitiko zvigadzirwa kumabvazuva China.
Address: B301, Building F, No. 3872, Shendu Road, Pujiang Town, Minhang DIST, Shanghai, China (Mainland).
+ 86 188 0031 9891 [Email akadzivirira] [Email akadzivirira]
Copyright © 2018 Shanghai Chleh Exhibit Industry Ltd. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.